LACK OF MERITOCRACY CROWNED THE STUPID CLOWNS IN THE MYANMAR MEDICAL GROUND | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Yes, if there is no meritocracy, clowns could be definitely crowned.
Let’s look at the following act of clowns in the Myanmar Medical Circus.
Onceapatient who hasamyxoedema or hypothyroidism,adisease caused by decreased activity of the thyroid gland, causingasubnormal basal metabolic rate of the whole body, went to consultaPhysician and complaint about her constipation and abdominal discomfort.
The Physician just rush through the physical examination and orderedaCT Scan of abdomen. (May beascam, wishing forakickback from the radiologist for that expensive investigation or justamere laziness to check thoroughly or may be inarush to see another patient or just wish to finish the consultation in order to go back home and watch the popular Korean soap opera.).
The Radiologist done the CT Scan and reported that there wasaCancer of the Rectum, the terminal portion of the large intestine, just above the anal canal which ends at the anus.
So the patient was referred again to the Colonoscopist to examine the colon with the fibreoptic flexible colonoscope. The Colonoscopist is using the state of art latest equipment. He used the robotic arm and controls the whole procedure with the remote control by watching at the monitor screen.
He recorded his procedure in detail. The following is the excerpts of his records_
“The scope enters the anus. And then after going for about two to three inches, I saw the annular rounded, well defined constricting mass obstructing the lumen. I could not go around that mass. I sawasmall hole at the centre that was likeaslit. I managed to enter the scope through that narrow opening but caught inablind end, cul-de-sac. At last I give up proceeding, retreat and decided to take biopsies from the mass. I took biopsies from three different positions. And then the biopsies were sent to the Pathologist.”
The Pathologist read the request form thoroughly, esp. the history of the present illness, procedure etc. After that only, he examined the biopsies and reported back as Adenocarcinoma, A malignant tumour originating in glandular tissue.
So at last the poor patient was referred to the Surgeon. But that night the patient suffered from “Acute abdomen”, sudden severe abdominal pain.
The Surgeon ordered the plain X-ray abdomen, erect and lateral. He found the GUD or Gas under the Diaphragm, which indicates that there is free air in the abdomen. Normally the gas always stays in the stomach and intestines only. There are some rare causes of GUD but usually the gas came out when there isahole or perforation of stomach or intestine. So the Surgeon decided to do the urgent laprotomy that is open up the abdomen, search the cause and proceed as necessary.
To the Surgeon’s surprise he could not find any disease in the abdomen and so decided to close back.
Now let’s doapost-mortem. Pardon me; I should not use this word as our patient is lucky and still alive. I don’t mean the real post-mortem butaretrograde analysis in detail what went wrong.
Although I had no chance to read back our gold standard, prescribed Surgery tax book, Bailey and Love for few decades, I still remember the words at the start of the Abdomen section.
“Abdomen isamagic box.”
And I still rememberafootnote also, “If you do not put your finger, you have to put your foot in it”, reminding the doctors, especially the Surgeons to examine the P.R. or Per Rectal digital examination. In laymen terms, to put the finger into the anus to examine and after all, more than 90% of the said suspected Cancer of Rectum is within the reach of the doctor’s examining finger.
The Physician missed that the myxoedema is the cause of the patient’s constipation. Even ifafirst year clinical student missed that, he could be failed.
The Radiologist had given the wrong diagnosis of Ca Rectum on the normal CT Scan.
Colonoscopist entered the wrong hole, vagina, mistaken the normal cervix of the uterus asatumour. Even he entered the uterus unknowingly. During the colonoscopy, it isanormal procedure to pumpalot of air through the scope. So the pumped air passed through normal uterine appendages and entered abdomen, bloated, distended and showed the positive GUD.
The Pathologist looked at the normal cervix cells and diagnosed wrongly as an Adenocarcinoma.
So this is the result of ignoring MERITOCRACY leading to choose the relatives and friends of Tatmadaw, to become specialists in different fields of Medicine. Now Myanmar Medical Circus is using the first class or state of the art medical facilities with the stone aged mentality under the stupid, racist, xenophobic, religious fanatic military dictator SPDC.
This entry was posted on September 24, 2009 at 3:57 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
6 Responses to “LACK OF MERITOCRACY CROWNED THE STUPID CLOWNS IN THE MYANMAR MEDICAL GROUND”
July 24, 2011 at 2:42 pm | Reply
After reading this, one line of an old Burmese verse crossed my mind: ျဖစ္လာရေလ တို႔တစ္ေတြမွာ… and so on, Saya. Thanks for writing this, and I believe you wouldn’t mind my sharing it on Facebook.
July 25, 2011 at 3:37 am | Reply
[…] LACK OF MERITOCRACY CROWNED THE STUPID CLOWNS IN THE MYANMAR MEDICAL GROUND […]
December 20, 2015 at 11:04 am | Reply
Prof. Daw Myint Myint Aye and Rector Prof. U Tun Thin were my best teachers
December 20, 2015 drkokogyi
Prof. Daw Myint Myint Aye is my BEST teacher.
Her theory teaching is very good but some other teachers (lecturers and professors) could also teach very well BUT in CLINICAL METHODS or practical teaching, SHE is the BEST as NO ONE could beat her.
It is obvious esp. in Nervous system examination. I am proud to tell my2kids (now both are graduated in Malaysian Universities and are working in KL) about her teachings.
For example, I am sure that NO ONE taught them how to hold the fingers from the side while examining the joint sense.
No one taught them, when checking the skin sensitivity (esp pain sensation) to check on the all dermatones of the limbs and not to miss (concentrate) on fingers and toes…etc.How to hold (or handle) the patient when testing the tendon jerks etc.
She taught us 40-45 yrs ago but I still remember and appreciate he teachings. Thank you Mummy lay.
FYI I never call (or address her as Mummy lay) as in my mind I alway admire, love and respect her more than Mummy gyi who I just scared and tried to always avoid her because she just used to show her anger, shout and had taught me less than 1% of that taught by my beloved respected teacher Daw Myint Myint Aye.
And by the way, Ah Ba or Rector Prof. U Tun Thin is (forgive me for using the present tense) also my BEST BOSS and teacher. He was the only one who keep on telling me to leave Myanmar as there is no future for me. (He started to tell me when I was working asaHouseman in his ward, MU 3. ) He encouraged me to sit the MRCP Part 1 and told me that he knew me asastudent and was impressed with my answers in Final Part2to the questions of Major Tin Ohn. When I complaint back that I had no practical skills, he told me that it could be learnt later after I passed Part 1. Actually Medicine was my favourite subject but because I was scared or AFRAID of the Prof. Head of Dpt. Mummy gyi I decided not to do Internal Medicine.
Rector Prof. U Tun Thin was the MP from BSPP. He was in the Health and Education Sub-committee of the Parliament. He told me that he had even mentioned Dr Than Win and my name in questioning why deserving candidates were not chosen for the Masters Programme. He even told the Sub-committee that according to the existing Universities acts and laws these two were already exampted from sitting the entrance examinations. But Prof. U Tun Thin never tell us the higher authorities’ reply.@ @ https://drkokogyi9.wordpress.com/2015/12/20/prof-daw-myint-myint-aye-and-rector-prof-u-tun-thin-were-my-best-teachers/
May 7, 2022 at 6:45 am | Reply
မြန်မာပြည်က ဦးငွေမက်၊ ဒေါ်ငွေမက်ဆရာဝန်တွေက လိုင်စင်ရ လူသတ်နေတာကြာပကော။
သူတို့ဆီရောက်တာနဲ့ တချို့ဆရာဝန်တွေက လူကိုလူလို့ မမြင်တော့ဘူး။ သူတို့အတွက် ငွေထုတ်စက် ATMလို့ မြင်ကြကုန်ပြီ။ ရက်ရက်စက်စက်ကို အမဲဖျက်တော့တာပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်ပြတာ အစာအိမ်ရောဂါ လို့ အရင် ပြောတယ်။ ဘန်ကောက်သွားမှ ပန်ကရိယ ကင်ဆာဆိုတာ သိပြီး ခိုင်ထူးဆုံးတယ်ပြောကြတယ်။ ထားလိုက်ပါတော့။ ကိုယ်တွေလဲ တိုက်ရိုက် သွားမေးထားတာ မဟုတ်တော့ အဲ့ဒီအပေါ်မှာ မှတ်ချက် မပေးချင်တော့ပါဘူး။
ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက် နှစ်ခုတော့ ပြောပြမယ်။
တခုက ကိုယ့်အဖေ အဖြစ်အပျက်။
ဆီးကြိတ် ရောင်လို့ ဆေးခန်းမှာ စပယ်ရှယ်လစ်နဲ့ သွားပြတယ်။ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာတဲ့။ နောက် သမားတော် ပြောင်းပြတယ်။ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ ကျိန်းသေတယ်တဲ့။ ခွဲစိတ်ရမယ်ပဲ။ တတိယ တယောက် ကတော့ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဆီးကြိတ် တော်တော် ယောင်နေတာမို့ ဆေး သောက်လိုက်ပါ။ ကောင်း သွားမယ် ပြောလို့ သောက်လိုက်တာ နောက် ၇နှစ် အကြာမှ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ် လောက်ကမှ ဆီးကြိတ်ခြစ်ရပြီး ကိုယ်နဲ့ နေနေတာ ခုအထိ။ (ဘယ်မလဲ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ က)
တခုက mother in law
သဲခြေကျောက် မထုတ် ဖြစ်ရာက သဲခြေအိတ် ယောင်၊ အဲ့ဒီကတဆင့် ပန်ကရိယယောင်၊ ဆေးရုံ စတက် ပြီး သုံးရက်ကြာမှ၊ အစာအိမ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ ပိုက်၊ အစာအိမ်ထဲ မဝင်ဘူးတဲ့။ ဆရာဝန်တွေက အဲလောက်ကြာမှ သိကြတယ်။ ကြားထဲမှာ ဆရာဝန် ကြီး၊ ငယ် round ကြေးက လောင်းကြေး ထက် များ နေပေမဲ့ အစာအိမ်ထဲ ပိုက်မဝင်တာ သုံးရက်ကြာ မှသိကြတယ်။ ဒါတောင် ပိုက် ထည့်ခိုင်းပြီး သုံးရက်တိတိ နေ့တိုင်းလာ Round နေတာ အဲ့ဆေးရုံက အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနော်။ ထားတော့။
သည်းခြေမက ပန်ကရိယပါ ယောင်နေလို့ လူနာ တပည့် ကို သောကြာနံအစ စနေနံအဆုံးနံမည် သုံးလုံးနဲ့ သဲခြေ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးက ထရာမက်ဒရော ထိုးဆေးကို icu မှာ ၂၄ နာရီ မပြတ် စက်တပ်ထာပြီး အချိန် တိုင်မာနဲ့ ထိုးတယ်။ ဒီတော့ MO ကို ကိုယ် သွားပြောတယ်။ လူနာ ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အဖေ ဆေးရုံ တက်တုံးက ထရာမက်ဒရော ၃ လုံးပဲ ထိုးတာတောင် အိမ်ရောက်သည့်အထိ ဂယောင်ကတန်း ပြောတုံးလို့ပြောတော့ ဆရာဝန်ကြီး ကို တင်ပြ ပေးမယ်တဲ့။
ပြန်လာ မေးတယ်။ အဲ့လို ပြောတဲ့သူက ဒေါက်တာ ဆရာဝန် လားတဲ့။ ခွန်းတုန့် မပြန်တော့ဘူး။ ဆွဲထိုး မိမှာ စိုးလို့။
အဲ့ဒီအကျိုးဆက်က ပန်ကရိယ ယောင်တာ
လောလောဆယ် ပျောက်သွားတယ်။ ပန်ကရိယ ရောင်ရင် ပျောက်အောင် သောက် တဲ့ ဆေး မရှိဘူးပြောပြီး ထရာမက်ဒရော ထိုးဆေးနဲ့ တလခွဲလောက် ဆက်တိုက် ထိုးတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် ဆေးရုံ မတက်ခင် ဝန်ကြီးများ ရုံးဘေး လမ်းလျောက်နေတဲ့ သန်သန်မြန်မြန် အဖွားကြီးက ဦးနှောက်ကျုံ့ပြီး အယ်ဇိုင်းမား ဖြစ်သွားတယ်။ (ကိုယ့်အဖေလည်း ဆီးကျိတ်ခွဲတာ အာရှတော်ဝင်မှာ ည ၁၂ နာရီ ထိုးခါနီး မှ ခွဲပြီး နောက်ပိုင်း အဲလိုပဲ ပါကင်ဆန် လို အယ်ဇိုင်းမားလို ဖြစ်ပြီး ချိသွားတယ်။)
ဆေးရုံဆင်းပြီး ကြောင်တောင်တောင် ဘဝနဲ့ နေ နေရပြီး နောက် ဘန်ကောက် တခါ သည်းခြေကိစ္စ သွားပြ လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပန်ကရိယ ယောင်တာ အတွက် သောက်ဆေး မရှိဘူး လို့ ဒီက ဆရာဝန်ကြီးက ပြောခဲ့ပေမယ့် ဘန်ကောက်ဆေးရုံက သောက်ဆေး ပါ ရခဲ့တယ်။
အဲ့လိုနဲ့ ဆေးကုန်ရင် ဘန်ကောက်ကို ဆေး မှာသောက် လုပ်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး သည်းခြေအိတ်လဲ ခွဲထုတ် လိုက်တော့ ခုတော့ ကောင်းနေပြီ။ သို့သော် ခေါင်းက မမှတ်မိတော့ဘူး။
သည်းခြေ စရောင်လို့ သည်းခြေ ကုတာ လူနာ အယ်ဇိုင်းမား ဖြစ်သွားတယ်။
တချို့က ဆေးကောင်စီတိုင်တဲ့ အကြံ ပေးတယ်။ မတိုင်တော့ပါဘူး။ တိုင်လဲ တောရိုင်း ဥပဒေနဲ့တွေ့ပြီး ကိုယ့် အစုအဖွဲ့ အတွက်သာ ပုလင်းတူ ဗူးစို့ သမားတွေ အချင်းချင်းသာ ပြန်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံး အကာကွယ် ပေးကြမှာ သိနေတာပဲ။
ကျောင်းသူလေး တယောက်ကို သွေးလွန်တုတ်ကွေး မှန်း မသိ၊ အူယောင်ငန်းဖျား မှန်း မသိ ပစ်ထားလို့ ဆမ သိမ်းခံ ထိတဲ့ ဆရာဝန်ကြီး ဆိုတာက သူ့ဘော်ဒါ လိပ်ခေါင်း ဖြစ်တာ ဆေးရုမှာ ခေါ်ပြီး ခွဲစိတ် ပေးနေသေးတာပဲ။ တိုင်သူ အရူးပေါ့။
လူကြီး တယောက်ရဲ့မြေး၊ အဖျား မကျ လို့
ရင်ခြင်း ဆက်တွေ ခွဲတဲ့ ဆယ်လီ ဒေါက်တာကြီးနဲ့ ပြတယ်။
တီဘီဆေးတွေ ကျွေးတယ်။ ခလေးက မျော့နေပြီ။ အမျိုးထဲက ဆရာဝန်တွေက မသင်္ကာလို့ ဘန်ကောက်မှာ ပြခိုင်း။ ဘန်ကောက် သွားမယ်လုပ်။ ဘန်ကောက် ရေကြီးတာနဲ့တိုး။
စင်္ကာပူ ဆက်ပြေး။ ရောဂါရှာတော့ တွေ့ပြီ
ဒီလိုနဲ့ သွားလိုက် ပြန်လိုက်၊ ကုနေတာ။ ဟိုတပတ် သူတို့အိမ် ရောက်တော့ ခလေးတောင် တော်တော်ကြီးပြီး စိမ်ပြေးတမ်း ကစားနေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ရောဂါ မေးတော့ OK
ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ ပြောချင်တာက စိတ်ဓါတ်တွေ ပျက် နေကြတာ ပြောတာ။ နေရာတိုင်း လူတန်းစားတိုင်း အနည်း နဲ့ အများ ပျက်နေတာ။ (ဆရာဝန် လောကမှာ ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီးတွေ အဆိုးဆုံး အဆင့်မှာ ရှိတယ်။ သူတို့က လိုင်စင်ရ လူသတ်သမားလို လူမမာတွေကို ခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်နေတာ။ ဘာလာလာ ခွဲရမယ် ဆိုတာချည်းပဲ။ လူနာရှင်တွေက လက်မှတ်ထိုး ရတာဆိုတော့ သေလည်း သူတို့က တာဝန် မယူဘူး။ တာဝန် မရှိဘဲ။
လူ့အသက်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ လျော့ရိလျော့ရဲနဲ့ ဖြစ်နေကြတာပါ။ စိတ်ဓါတ် အပျက်တွေနဲ့ လုပ်တာတော့ အဆိုးဆုံးပဲ။
မနေ့က ဆရာဝန် အကြောင်းတွေ၊ လူနာ အကြောင်းတွေ၊ ဒီရောဂါ တခု ကုလိုက်တာ ဟိုနောက်ရောဂါ တခု နောက် တမျိုး ထပ်ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေ ရေးအပြီး ကျွန်တော် ဂျင်းကောင် ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်း ပြောရအုံးမယ်။
ကျွန်တော့်အဖေ အူမကြီး ကင်ဆာ ဆိုပြီး ဆေးရုံ တက် ရသေးတယ်။ တိုတို ပြောရရင် ခွဲစိတ်တာ အောင်မြင်တယ်။ တခု ရှိတာက ခွဲခန်း ထွက်ခါစမှာ လူကြီးဆိုတော့ မေ့ဆေး အရှိန် မပြယ်သေးဘူး။ မေ့ဆေးအရှိန် မပြယ်သေးတော့ နှလုံးခုန်သံက နရီစီးချက် မမှန်ဘူးပေါ့။နှလုံးခုန် မမှန် ရတဲ့အထဲ နှလုံးခုန် တိုင်းစက် မမှန်တာက ပိုဆိုး။ နည်းရာကနေ ရုတ်တရက် ၃၀၀ ဖြစ်၊ ချက်ခြင်း၂၀၀ကျ သွား ဖြစ်နေတာ။
အဲ့တာနဲ့ ကျနော်က မေးတယ်။ မင်းတို့ စက်က မဟုတ်တော့ဘူး။ စက်မှာ ပြ သလိုဆို ငါ့အဖေ သေတာ ကြာပြီ။ နောက်တလုံး သွားယူ ပြောတော့ သွားယူတယ်။ တလုံး မကောင်း တလုံး ပြောင်းနဲ့ သုံးလုံး မြောက်မှာလဲ ထူး မခြားနား မို့ တခွန်း ပြောလိုက်တယ်။ မင်းတို့ ဆေးရုံက နှလုံး စပါယ်ရှယ်လစ် တယောက်လောက် အွန်ကော ခေါ်လို့ မရဘူးလား။ ခေါ်ပေးလို့ ပြောတော့ ရောက်လာပါပြီ။ နဖူးပြောင်ပြောင် နံမည် နှစ်လုံးနဲ့ စနေနံအစ နံမည်နဲ့ တရုပ်ဆရာဝန်ကြီး။
ဟိုစမ်း ဒီစမ်း လုပ်ပြီး တခု ပြောတယ်။ နှလုံးစက် တပ်ရမယ်။ မတပ်ရင် လူနာ လမ်းလျောက်ရင်း ဘုန်းကနဲ လဲသွားမယ်။ အိပ်ရာက မထပဲ ဘာလုပ်လုပ် အိပ်ရင်း လုပ်ရမယ်။ ထမင်းစား လဲ။ အိပ်ယာမှာ နားနားနေနေ စားရမယ်။ အိမ်သာသွားလဲ လမ်းမလျောက်ရပဲ ဝှီးချဲနဲ့သွားရမည်။ ပြောလိုက်တာမှ မျိုးကိုစုံရောပဲ။
ဆရာကြီး ကျွန်တော့် အဖေ ခွဲခန်းက ထွက်လာတာ ည၁၁နာရီပါ။ ခု မနက်၄နာရီ ဘဲ ရှိသေးတယ်။ နောက်တခါ ခွဲခန်း ထပ် ဝင်ရင် စိတ်ဓါတ် သိပ်ကျသွားမယ်။ ပြောတော့ အဲဒီ့ တရုပ် ဆရာဝန်ကြီးက သူ့ ရင်ဘတ်ကို သူ့ လက်ညှိုးနဲ့ ကြက်ခြေခတ် ပြရင်း
နိုးနိုး ဒါမိုင်နာ၊ ဆရာတို့ လုပ်နေကျ၊ ကုန်တာလဲ ၄၅ သိန်း လောက်ပဲ ကုန်တယ်။ လူနာအတွက် ပြောတာတဲ့။
အဲ့မှာ ပညာ ပြတော့တာပဲ။ ဆေးရုံ မဆင်းမခြင်း နှလုံးခုန်တာ မြန်လာရင် တာဝန်ကျ နာစ်မကို သွား သတင်းပို့။ သူက MO ကို ဆေးတိုက် ခိုင်းတယ်။ ပုံမှန် ငြိမ်အောင် ထိန်း ရမဲ့ဆေး
တလ ကြာခဲ့ ပါတယ်
အဲ့နောက် ဆေးရုံဆင်းဖို့ လုပ်ပါတော့တယ်။
မဆင်းခင် ဆေးရုံ ကုတင်၊ အောက်စီဂျင်အိုး၊
ဝှီးချဲ၊ လေးချောင်းထောက် တုတ်၊ အိမ်သာအိုး၊ အစရှိလို့ လိုသမျှ ပြောသမျှ ပစ္စည်းအားလုံး အေ အေ ဖာမစီ မှာ ဝယ်ပြီး သကာလ
အော်လို့ လူနာတင် ကားနဲ့အတူ အိမ်ပြန် ရောက်လာ ပါတော့တယ်။
နောက်နေ့ မနက် နှလုံးကု ဆရာဝန်ကြီး နောက် တယောက်ဆီ သွားပြီး ဖြစ်တာ ပြောပြ၊ ဆေးရုံ မဆင်း မခြင်း ရိုက်ရတဲ့၊ တနေ့ တဒါဇင် နှုံး ရိုက်ထားတဲ့ အီးစီဂျီ တထပ်ကြီးပြ။
အဲ ဆရာဝန်ကြီးကတော့ တရွက်ချင်း ကြည့်တယ်။
ပြီးတော့ ၂ချက်ပဲ မေးတယ်။
ခင်ဗျားအဖေကို နှလုံးရှော့ရိုက်စက်နဲ့ နှလုံးပြန်ခုန်အောင် လုပ်ပေးရတာမျိုးရှိလား?
ပြီးတော့ ကျွန်တောပြတဲ့ အီးစီဂျီတွေကိုကြည့်ပြီး အီးစီဂျီမှာ နှလုံး ခုန်နှုန်း ၄၉ တကြိမ်တွေ့ တာကလွဲလို့ ကျန်တာတွေက ၆၀ ပတ်လည် တွေ ချည်းပါပဲ။
နောက်ပိုင်းမှာ ဘာအတွက် စက် တပ်ခိုင်းတာလဲ။
ကောင်းပြီ။ ဒါဆို ဒီဆေး၂မျိုး ယူသွားပြီး ဆေးသောက်ပြီး အခြေအနေကို ပြန်ပြောပြ တဲ့။
ခဏ နေတော့ သွား စူးစမ်း။
အဖေ သက်သာရဲ့လား၊ သက်သာလားပေါ့။
ကိုယ် မမေးရခင် ကထဲက
ဒါနဲ့ ဆရာဝန်ကြီးဆီ ချက်ချင်း ပြန်သွား။
ဆရာကြီးက တခွန်း ပြန်ပြောတယ်။
ခု ကျွန်တော့် အဖေ၈၃နှစ် ရှိပါပြီ။
စက်တပ်ခိုင်းသူနဲ့ ဆေးပဲပေးသူ ဆရာဝန်ကြီး နှစ်ယောက်လုံးလဲ သက်ရှိ ထင်ရှား ဆေးကုမြဲပါ။
ကျွန်တော်သာ ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်း တန်ဆာပလာ အပိုတွေနဲ့ ။ ပြောရရင် ဂျင်းကောင်ကြီးကို ဖြစ်လို့ ။ ။
Credit : Myo Thu Soe
(သူများစာခိုးပြီး လင့်မပေးသူဆီက မလာတယ်။)